Izindaba - Eminyakeni yamuva nje, ukukhula embonini yezimpahla yaseChina ekhulile kuye kwehla futhi izinhlobo zendabuko sezindala ………
Eminyakeni yamuva nje, ukukhula embonini yezingubo ezikhuliswe ekhaya yaseChina kwehlile futhi nemikhiqizo yendabuko seyikhulile, kuyilapho izinhlobo ezivelayo zisezigabeni zokuqala zokukhula. Ngasikhathi sinye, izinhlobo eziningi zamazwe omhlaba ezinokuhlangenwe nakho okuningi ku-R & D, ukwakhiwa, iziteshi zokuthengisa nokusebenza komkhiqizo kusheshisa ukwanda kwazo emakethe yaseChina. Ngaphezu kwamadolobha esigaba sokuqala, nawo acwila emadolobheni asezingeni lesibili nelesithathu, aqala ukuncintisana okunzima nemikhiqizo yezimpahla zasekhaya nokuphoqa amabhizinisi ezembatho ukuba ashintshe ngokuphendula isimo.
sifingqe amaphuzu amane embonini, ngokulandelana:
Okokuqala, ukungena kwezingubo ze-bespoke emakethe yaseChina kuncane kakhulu
Imodi yebhizinisi yamabhizinisi akhiqiza ingubo eChina ihlukaniswe ikakhulu ekukhiqizeni nasekuthengiseni izingubo nokwenza ngokwezifiso izingubo. Iningi labakhiqizi bezingubo ikakhulukazi likhiqiza izingubo zamamodeli ajwayelekile ngobuningi. Izingubo ezenziwe ngezifiso, ngakolunye uhlangothi, zidinga ukwenziwa ngokwesimo ngasinye sabathengi abathile. Ikhiqizwa ngawodwana futhi isuselwa ekuthengisweni. Akunabungozi bokusungula, kepha isilinganiso sokusebenza sincane.
Okwesibili, Kunezinhlobo ezintathu zamabhizinisi asezingutsheni ezenziwa ngokwezifiso
Okwamanje, amabhizinisi okwenza ingubo yasekhaya ahlukaniswe kakhulu ngezigaba ezimbili: okokuqala, kukhona ama-couture studios noma ama-brand brand, Lolu hlobo lwengubo olwenziwe ngokwezifiso lunomjikelezo wokukhiqiza omude, inani lentengo ephezulu, iqembu lamakhasimende eliqondiwe eliphakeme kakhulu kanye Ulandelwa ngomunye wezimpahla zokugqoka ukuthuthukisa umugqa wezingubo ezenziwe ngokwezifiso, ikakhulukazi kumakhasimende eqembu ngeqoqo elincane, ubunzima obuphansi bezinsizakalo zenkambiso, ezifana nomfaniswano wesikole.
Okwesithathu, Isimo sokuthuthukiswa kwenkundla yaseChina yokugqoka ngokwezifiso
kuthonywe izinga lokusetshenziswa nesikhathi esifushane sokuthuthuka, yize ukwamukelwa komqondo wokwenza ngokwezifiso izingubo kuthuthuka kancane kancane, awukho umkhiqizo kazwelonke emkhakheni wokwenza ngokwezifiso izingubo eziningi, futhi imakethe yasekhaya isengakavuthwa kakhulu.
Ngokuya kwabahlanganyeli bemboni, abanye abakhiqizi bezingubo sebeqalile ukungena emkhakheni wokwenza ngokwezifiso izingubo eziqondene nomuntu uqobo.Imboni isiqalile ukuqhuba ibhizinisi elenziwa ngokwezifiso lokwembatha, kanye nezinkampani ezibalulwe ezenze impumelelo ethile (noma ezibalwe) ikakhulukazi
Okwesine, Ukuphikisana phakathi kokuqhutshwa kwedatha nokukhiqizwa okuhlakaniphile ukubhekana nokwenza ngezifiso nokukala.